हर्ष न बिस्मात
रेबिका गुरुङलाई पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको थियो। अन्नपूर्ण होटलमा धुमधामसित घोषणा भएको ‘लिली बिली’मा उनी प्रदीप खड्काको अपोजिटमा कास्ट भएकी थिइन्। तर, बीचमा के खटपट पर्‍यो कुन्नि, पछि उनको ठाउँमा प्रियंका कार्की आइन्।
त्यसपछि आएका थुप्रै अफर उनले रिजेक्ट गरिन्। निकटस्थलाई भने उनले प्रदीप र अनमोल केसीको अपोजिटमा मात्र फिल्म खेल्ने बताउने गरेकी थिइन्। तर, वर्षमा एउटा फिल्म खेल्ने दुवै हिरोलाई रेबिकासँग फिल्म खेल्न के खाँचो ? बाध्य भएर उनले पुष्प खड्कासँग जोडी बन्ने अफर स्विकारिन्। ‘मारुनी’मा उनले पुष्पको श्रीमतीको भूमिकामा अभिनय गरेकी छिन्, जुन फिल्म भदौ १३ मा प्रदर्शन भइसकेको छ।
तर, रेबिकाका लागि यो फिल्म हर्ष न बिस्मात भनेझैँ भएको छ। फिल्मबाट जेजति फाइदा भयो, त्यो सबै साम्राज्ञीराज्यलक्ष्मी शाह र पुष्पले लिए। फिल्ममा अभिनयको क्रेडिट साम्राज्ञीले लिइन् भने पुष्पले पनि प्रचारप्रसारमा आफूलाई अगाडि राखेर राम्रै फाइदा लिए। तर, रेबिकालाई भने केही न केही ! उनलाई न दर्शकले राम्ररी नोटिस गरे, न अरू निर्माता–निर्देशकले।